Small mhuri Appliance chikamu
Astronomy teresikopu zvikamu
Hair drier kuvat zvikamu
Vakaungana zvinogadzirwa kuti vatengi
Plastic jekiseni richigadzirisa Workshop
Cnc machine Wekishopu
Progressive tsikwa chinhu rwekushanda nesimbi nzira inogona Ndigopoteredza punching , coining , vakafugama uye nedzimwe nzira akawanda kunatsiridza simbi mbishi zvinhu, pamwe ane zvaitika dzokudya hurongwa.
Zvokudya Hurongwa achisunda kanyika nesimbi (sezvazvakanyorwa unrolls kubva coils) kuburikidza vose nhepfenyuro ane mberi tsikwa achifa. Chiteshi mumwe anoita mumwe kana kupfuura akavhiyiwa kusvikira rapera chikamu anoitwa. Kwokupedzisira chiteshi iri cutoff oparesheni, izvo Anopatsanura rapera chikamu kubva pakutapirwa web. The vakatakura dandemutande, pamwe simbi iri chibhakera kure zvapfuura kushandiswa, ikarapwa sezvo chinyorwa simbi . Vose vari kubvisa, akakoromora (kana achibva dies) ndokubva vabudiswa kubva kufa yakatarwa, uye vakawanda kugadzirwa kazhinji kune chinyorwa bins Via muchivande chinyorwa zvinhu conveyor mabhandi.
The mberi tsikwa ikafa anoiswa mugomba reciprocating vachinyatsogona muchina . Sezvo nhau kunoita kumusoro, pamusoro achifa kunoita nayo, izvo rinobvumira mashoko zvokudya. Apo nhau kunoita pasi, iyo kufa anovhara anoita tsika oparesheni. With nerimwe nokuvatema venhau, chikamu rakapera yabviswa kubva achifa.
Sezvo mamwe basa riri kuitwa nomumwe "chiteshi" pamusoro achifa, zvakakosha kuti wonamatidza anofanira mberi chaizvo chaiyo zvokuti aligns mukati mashoma thousandths ane padiki sezvo chinofamba kubva panzvimbo kuenda panzvimbo. Bara zvakaumbwa kana conical "vezvikepe" kupinda kare kubayiwa mumakomba kumativi ari ubvise kuvimbisa kunangiswa ichi sezvo dzichifura mashandiro kazhinji havagoni kupa zvakafanira nemazvo zviri zvokudya pakureba.
Progressive tsikwa zvinogonawo kubudiswa musi chinja yokudhinda. Ava yokudhinda kuti uchatamisa zvinoumba kubva pachiteshi kuenda nokushandiswa kwe "minwe" zvokuimba. Nokuti vakawanda kugadzirwa kwezvinhu ndokutsika zvikamu izvo zvaanoitawo kuoma mu-wokudhinda kushandiswa, nguva dzose here kushandisa kunoramba muchina. Mumwe zvakanakira kwakadai wokudhinda ndiyo nguva kugadzirwa yatinofema. Zvichienderana pamusoro chikamu, nezvinobvamo unogona kumhanya zvakanaka pamusoro 800 nhengo / miniti nyore. Mumwe zvazvakashatira ichi mhando wokudhinda kuti hazvina akakodzera mukuru nemazvo zvakadzama mufanidzo riri kana kudzika tsikwa akapfuudza dhayamita ari chikamu. Kana zvakakodzera, izvi rinoitwa pamusoro kutamira wokudhinda, vanomhanya vari nomumugwagwa kwaitora nguva aimhanya, uye kuvimba zvemaziso minwe kuti abate chezvinonhuwira panzvimbo munguva yose dzichiumbwa kutenderera. Kana ari mberi venhau, chete chikamu kusikwa kutenderera anogona kutungamirirwa patsime yakatakura dzisimbe kana zvakafanana, izvo zvinoguma concentricity uye ovality nyaya uye nevasiri yunifomu zvinhu ukobvu. Other zvazvakashatira mberi Michina zvichienzaniswa uchatamisa nemichina ndiwo: kuramba mbishi zvinhu chiyamuro kunodiwa kutamira zvikamu, zvokushandisa zviri nokuti vakaita zvikuru zvinodhura inoperera zvishomanene akazvimirira murau pa chiteshi; hazvibviri kuti aite pezvakaitwa pachaunga kuti zvinoda chikamu kusiya wonamatidza (muenzaniso beading, necking, flange Curling, shinda rinopfungaira , muhombe tsikwa etc.).
Dies kazhinji yakagadzirwa chishandiso esimbi kutsungirira mukuru kuvhunduka vachizvitakudza rinobatanidzwa, ane zvakafanira unopinza nokuveza unopinza, uye kudzivisa hasha masimba zvinobatanidzwa.
Mari iri pakutsvaga uwandu features, izvo kusarudza chii tooling vanofanira kushandiswa. Zvinonzi zano kuchengeta zvinhu sezvo nyore sezvinobvira kuchengeta mari tooling kushoma. Features kuti vari pedyo pamwe chete pave dambudziko nokuti urege kupa Clearance zvakakwana nokuda yepanchi, izvo kungaita mumwe chiteshi. Zvingavawo matambudziko kuti yakamanikana maronda uye miganhu.
Muenzaniso wakanaka zvinobikwa mberi vanofa ndiye muvharo ane chinwiwa anozvigona . Muedzo Tab anoitwa mune imwe mberi tsikwa rikurumidze uye muvharo & gungano yakaitwa muna imwe, muedzo Tab panguva dzichichera kuruoko rworudyi yorusvingo kupinda muvharo & gungano rikurumidze.
Post nguva: Jul-10-2017
Chii Plastic jekiseni Kuumbwa
Chii The CNC machine Brass Parts